जसपा नेता भन्छन् : कांग्रेस-माओवादीको भर भएन, एमालेसँग काम गर्न सहज – Nepal Press
जसपा नेता भन्छन् : कांग्रेस-माओवादीको भर भएन, एमालेसँग काम गर्न सहज
‘शंकर पोखरेलविरुद्ध बनेको समीकरणको जग नै बलियो थिएन’
२०७८ वैशाख ११ गते ९:०५
रुपन्देही । सन्तोष पाण्डे जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका युवा नेता हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र स्वयम् उनको दल समेतले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकै दिन उनले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
पाण्डेसहित ४ जना जसपाका नेताहरू सरकारमा सामेल नभएर एमालेलाई साथ नदिएको भए शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने निश्चित थियो । एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा लुम्बिनी विभाजित छ ।
एउटा पक्षले पाण्डेसहित चारजना सांसदलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ भने अर्को पक्षले पाण्डेसहित चारजना सांसदको निर्णय नै आधिकारिक भनेको छ । यसैबीच एमालेसँगको सहकार्य, जसपाको आधिकारिक निर्णय तथा उनका आगामी कार्ययोजनाका लागि नेपाल टकका लागि रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी :
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकै दिनमा मन्त्री हुनुभयो, के हो वास्तविकता ?
जनता समाजवादी पार्टीले पहिलेदेखि नै यो विषयमा आफ्नो गृहकार्य गरेकै थियो । हामीले पार्टीको केन्द्रमा पनि प्रदेशमा हामीले कोसँग सहकार्य गर्ने भनेर लिखित पत्र पठाएका थियौं । खासगरी बाहिर भ्रम के भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै मन्त्री भए त्यो होइन ।
तपाईसहित ३ जनालले त अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको होइन र ?
हो यही विषयमा भ्रम छ, म तपाईमार्फत सबैलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि मैले धेरै महिना पहिले कुनै विषयमा गरेको हस्ताक्षरलाई यो विषयमा जोडेर दुरुपयोग गरिएको छ, यसको मैले विज्ञप्तिबाट नै खण्डन गरिसकेको छु । हाम्रो पार्टीबाट संसदीय दलले वैशाख ५ गते नै सरकारमा सहभागी हुने र एमाले नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्र्य गरेर जाने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यो पार्टीको संस्थागत निर्णय हो ।
जसपा संसदीय दलको नेता सहश्रराम यादवले त अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीसँग जाने पार्टीको निर्णय हो भन्नुभएको छ त ?
वैशाख ५ गतेभन्दा पहिले उहाँ संसदीय दलको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । तर त्यो दिन संसदीय दलका उपनेता विजय यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसदीय दलको नेतामा मलाई चुनेको छ । ६ सदस्यीय दलको बैठकमा हामी ४ जना सहभागी थियौं । त्यही भएर नै हामीले संस्थागत निर्णग गरेका छौं ।
जसपाको निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी भएकाले तपाईहरुमाथि कारवाहीको कुरा आएको छ त ?
पहिलो कुरा त कारवाही कसले गर्ने भन्ने विषय हो । हामीले पार्टी हित विपरीतको निर्णय गरेका छैनौं । अर्को, हामीलाई केन्द्रले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न दिएको महशुस गरेका छौं । पार्टी केन्द्रले केही भनेको छैन । व्यक्तिले भनेर केही हुँदैन ।
अर्को कुरा लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो पार्टी एकीकरण भएपछि समायोजन नै भएको छैन । त्यसैले म ढुक्क छु केन्द्रले हामीले गरेका निर्णयमाथि सकारात्मक नै मानेको छ । किनकि यो प्रदेशका महत्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक योजना, सामाजिक विकास, कृषिमा जिम्मेवारी पाएका छौं, यो हाम्रो ठूलो सफलता हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पार्टीहरुसँग पनि सहकार्य गरिरहनुभएको थियो किन साथ छोड्नुभयो त ?
उताबाट पाउने पनि मन्त्री नै हो तर धेरै असुरक्षित थियो उहाँहरूसँग । धेरै पार्टी मिलेको ठाउँमा सरकार पनि खिचडीजस्तो हुन्छ नि । चाहेजस्तो तरिकाले काम गर्न पाइँदैन ।
अर्कोतर्फ त्यो समूहको गणितसँग पनि ढुक्क हुन सकिएन । मैले धेरै पटक उहाँहरुसँको बसाइमा सोधें तपाईहरूले बहुमत पुर्‍याउने आधार के हो भनेर ? तर उहाँहरूको जवाफ थियो एमालेका साथीहरूले आश्वासन दिनुभएको छ फ्लोर क्रस गरेरै साथीहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ ।
यस्तो कल्पनाको पछाडि लाग्दा धोका पाइन्छ भनेर साथ छाडेको हो । उहाँहरूको विगत पनि हेरिएको हो । कांग्रेस माओवादी यसअघि सरकारमा हुँदा तराईका मुद्दा कति सम्बोधन गरे प्रष्ट छ । सरकारमा हुँदा केही नगर्ने बाहिर बसेर ठूला कुरा गरेर हुँदैन नि । उहाँहरूले मधेसलाई आधार मानेर राजनीति गरेको भए जसपा आउने नै थिएन नि । समीकरण अस्थायी र स्वार्थअनुकुल मात्र देखेपछि साथ छाडेका हौं ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने दलका सांसदहरुले त तपाईलाई राजनीतिक बेइमानको आरोप लगाइरहनुभएको छ त ?
ए, हामी उहाँहरुकै सति जानुपर्ने ? उहाँहरूले भनेको भए राम्रो,नभए नराम्रो यस्तो पनि हुन्छ ? जसपाले आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि निर्वाचनमा गएको हो, संसदमा गएको हो । जनताले हामीलाई सांसद बनाएर पठाए । केही काम गरेर देखाउ भनेका छन् । त्यसका लागि मन्त्री आवश्यक हुन्छ नै । हामीले एमालेसँगको सहकार्यमा काम गर्न सहज देख्यौ, अवसर पनि पायौं त्यसैले यता लागेका हौ । आरोप लगाउनेहरु हुन्छन् यो उहाँहरुको नकारात्मक साेच हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव असफल भयो त अब ?
अविश्वासको प्रस्ताव त हामी उहाँहरूसँग भएपनि सफल हुने थिएन । अब त के जवाफ दिनुपर्ला र । समीकरणको जग नै बलियो थिएन अविश्वास प्रस्तावको । तथ्यांक नै आधारहीन भएपछि कसरी पार लाग्छ ?
पार्टीको कारबाहीलाई के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त पार्टीमा कारबाही भन्ने नै हुँदैन । हामी जनताबाट निर्वाचित भएका हौं, जनताको कारँही स्वीकार गर्छौं नि । आर्मी प्रहरी हो र भन्या ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नलाई ? अनि हामीले के गल्ती गरेका छौं कारबाही भोग्नुपर्ने खालको ? दुई तिहाइ बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयअनुसार अगाडि बढेका हौं । केही व्यक्तिले नचाहेर हुँदैन नि । हामीले संस्थागत निर्णय गरेर गएका छौं ।
सरकारमा सहकार्य गर्दा एमालेसँग अरु पनि केही शर्त छन् कि ?
त्यस्तो केही छैन । हामी काम गर्नका लागि राजनीति गरेका हौं, जनताको सेवा नै हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेका छौं । सधैभरि कोही पनि जिम्मेवारीमा रहँदैन । जिम्मेवारीमा रहँदा देखिनेगरी काम गरेर अगाडि बढ्छौं । एमालेसँग अरु विषयमा केही भएको छैन । केन्द्रबाट जे नीतिगत निर्णय आउँछ सोही अनुसार अगाडि बढ्ने हो । प्रदेशमा यहाँको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्ने हो । यो संघीयताको भावना हो ।
के योजना लिएर सरकारमा जानुभयो ?
सबैभन्दा पहिले त मन्त्रालयको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्छु । यो भन्दा अगाडि शुरु भएका कामलाई छिटो पूरा गर्ने अभियानमा लाग्दै रोकिएका कामलाई अगाडि सार्छु । त्यसका साथै नयाँ योजना बनाउने छु । आमनागरिकले प्रदेश सरकारको महशुस गर्नेगरी काम गर्नेछु ।
तराईका सीमा क्षेत्रको विकास पनि प्राथमिकतामा पर्नेछन् । १२ जिल्लाको वास्तविक अवस्था निकाले अगाडि बढ्नेछु । केही न केही सुधार गर्नेछु । योे कार्यकालमा सबै काम गर्न बजेटले पक्कै पुग्ने छैन नयाँ आउनेलाई काम गर्नका लागि सहज बनाउने छु । बीच बीचमा गरेका प्रगति तपाईहरुमार्फत जनतालाई भनिरहने छु ।
अन्त्यमा, कोरोना संक्रमण बढ्दो छ के छन् रोक्ने योजना ?
विगतमा पनि यसको त्रासबाट जोगाउन सबैभन्दा धेरै नागरिकको दैलोमा पुग्ने म हुँ भन्ने दावी गर्दछु । सरकारमा नहुँदा पनि ५० हजारलाई खाद्यान्न पुराउन घरमै पुगेको हुँ । सधै सडकमै हुन्थें सीमामै हुन्थें संयोग कोरोनाले छोएन ।
अहिले दोस्रो लहरले पनि यो प्रदेशलाई प्रभावित बनाउन थालेको छ । यसको रोकथामका लागि लागि योजना बनाएर लाग्नेछु । नेता मरे अर्को जन्मन्छ जनता मर्नुहुन्न भनेर लागिरहेको छु । यो पटक त सरकारमै छु ।कोरोनाले भन्दा अरु कारणले धेरै नागरिक मरेका छन्, त्रासमा होइन सुरक्षित बनाउने, उपचारलाई ध्यान दिने र संक्रमणलाई कमजोर बनाउन सफल हुनेछौं ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख ११ गते ९:०५
‘अब दबाबबाट मुक्त भएर मिस वर्ल्ड फिनालीमा प्रतिस्पर्धा गर्छु’
कांग्रेसकी कान्छी केन्द्रीय सदस्यलाई प्रश्न– समावेशी कोटाबाट कतिन्जेल नेता भइरहने ?
‘माओवादीको नयाँ मोडल-आन्तरिक मूल्यांकन ५० र चुनावबाट ५० प्रतिशत जोडेर बिजेता छान्ने’
‘राष्ट्रियसभा चुनावमा गठबन्धन गर्ने वाध्यता छ, आमचुनाव एक्लै लड्छौं’
‘संसद विघटन नगरेको भए प्रचण्डले एमाले कब्जा गर्थे, हामीसँग अरु धेरै सूचना थिए’
५० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाएपछि मात्र बुस्टर डोज थाल्ने सरकारको तयारी छ : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा
प्रचण्ड नेताहरुको पनि नेता हो, चटक्क छोड्न मिल्दैनः पोखरेल (भिडिओसहित)